“बाईक काण्ड” बारे विप्लव पुत्र प्रकाशले मुख खोले ! (अन्तरबार्ता ) – On Khabar
यो राजनीति धेरै टिक्ने वाला छैन। हामी माथि जुन हिसाबले प्रतिबन्ध लगाउने, युद्ध थोपर्ने र अनावश्यक रूपमा उत्तेजित गर्ने प्रपञ्च भइराखेका छन्, उनीहरूले खनेको खाल्डोमा उनीहरू नै पर्नेछन्। (बिबिसी नेपाली सेवाबाट)
April 24, 2019 onkhabar
Spread the love अनखबर सम्बाददाता गन्यपाधुरा गाउपालिका–१ साहुखर्कमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। यसअघि डडेल्धुराका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण खड्काले ६ जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराएका थिए। मृत्यु हुनेमा तीन पुरुष र दुई महिला रहेको प्रहरी निरीक्षक खड्काले बताए। मृतकहरुको सनाखत हुन सकेको छैन। भीमदत्त राजमार्गअन्तर्गत गन्यपाधुरा गाउँपालिका–१ को साहुखर्क […]
Spread the love मकवानपुर, ३० कात्तिक । भाद्र २४ गते आइतबारबाट अवकाश पाएका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले जाँदाजाँदै अकुत सम्पत्ति जोडेको प्रमाण भेटिएको छ । क्षेत्रीले कमाएको अकुत सम्पत्ति पत्नी रीता बस्नेत क्षेत्री, छोरा अभिषेक र आभुषण तथा स्वयम् उनको नाममा देखिएको हो । मकवानपुर नगरपालिका वडा नम्बर–४ हेटौडास्थित क्षेत्रीले करोडौंको जग्गा जमिन जोडेको प्रमाण भेटिएको छ […]
एमाले सिद्धाउने प्रचण्डको योजना सफल बन्दै, ओलीमाथि यसरी ‘हावी’ भए प्रचण्ड !
Spread the love अनखबर पौष १५, झण्डै ६ महिना अगाडी पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डले देशको आवश्यकता भन्दै कुलिएय । कतिपयले विश्वास नगरेको बामपन्थी एकता गरेर देखाउनुमा दुईवटा कारण थिए । एकातिर विदेशी शक्तिहरुले उनीहरुलाई एक बनाएर आफ््नो स्वार्थ पूरा गर्नु थियो भने अर्कातिर प्रचण्डलाई आफू हावी हुनु थियो । आफ््नो पार्टीभित्र आफू नै रक्षात्मक बन्दै […]